जुन फोटोलाई अश्लिल फोटोमा सनमले परिणत गरेर राखेको थियो……….. | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
August 18, 2018 in अर्थ // कृषि उपज बजार केन्द्र नहुंदा समस्या
August 18, 2018 in विशेष हाइलाइट // जबर्जस्तीको करणीको प्रयास गर्ने विक कारागार चलान
August 17, 2018 in विशेष हाइलाइट // सूचनाको पाए लगत्तै काम गर्छु ः एसपी पोख्रेल
August 17, 2018 in समाचार // राप्ती ववई सहायक क्याम्पस प्रमुखमा शर्मा
August 17, 2018 in विशेष हाइलाइट // उपमहानगरपालिकाले नसुनेपछि आँफै सरसफाई
August 17, 2018 in अर्थ // गढवामा कृषिको जग्गाको कर पचास प्रतिशत घट्यो
August 17, 2018 in शिक्षा/स्वास्थ्य // गढवामा फोहर ब्यवस्थापन गरिने
August 17, 2018 in अर्थ // कोसेली घरमा सिन्कीको अचार देखि बधिया भालेसम्म
जुन फोटोलाई अश्लिल फोटोमा सनमले परिणत गरेर राखेको थियो………..
| 195 Views | Published Date : 2nd June 2018 |
दीपक जी.एम. '' आर्जव '' कथा :यौन प्यासी
क्षणिक सोचले मानिसलाई खाल्डोमा धकेल्न बेर लाउँदैन । तर पनि अबुझसरी धकेलिन विवश भएका हुन्छन् । कसैलाई पश्चातापको आगोमा झल्सिन बाध्य बनाउँछ भने कसैलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याउँछ।
बारम्बार बजेको घण्टीले सनम ब्यूझिन पुग्छ । हाई गर्दै जीउ तान्दै सनम उठ्छ र हाप पाइन्ट लगाउँदै माथिल्लो नांङ्गो शरीर लिई ढोका खोल्न पुग्छ । ढोकामा एउटी अधवैंशे उमेरकी महिलालाई आफ्नो अगाडि देख्दा सनमको जीउ जिरिङ्ग हुन पुग्छ । मनमा नानाथरी सोच्दै ती महिलालाई माथिदेखि तलसम्म नियाल्न थाल्दछ । “ए सनम के हेरेको ?” भनि ती महिलाको आवाजले उसको एकाग्रता भंग हुन पुग्छ । “हजुर के– केही होइन । बाबा आमा त हुनुहुन्न आन्टी अकमकाउँदै सनम बोल्छ । जबाफमा थाहा छ मलाई त्यसैले त तिम्रो लागी ब्रेकफास्ट ल्याईदिएकी छु ल लेऊ ।
हातमा दिँदै ती महिला भ¥याङतर्फ झर्न थाल्छिन् । सनम एकोहोरो ती महिला गएको हेरिरहन्छ । मनमा अनेकौं तरङ्गहरु बोकी नास्ता खान थाल्दछ । अघिका दृश्यहरुलाई बारम्बार कल्पिन थाल्छ । उमेरले भर्खर १७ वर्ष भए पनि सनममा यौवनका थैलीहरु चाहिएको भन्दा बढी नै खाँदिएका थिए । उमेरले मात्तिएको थियो जवानीले रमझममा डुब्न बाध्य थियो । फोनको घण्टीले सनम झसंग हुन्छ । फोन उठाउँदै बोल्छ । हेलो ‘उता बाट बिजु बोल्छ । सनम के छ, के गर्दै छौ ? जवाफमा ठीकै छ । घरमा कोही हुनुहुन्न यतिकै बसिराछु यार । के……..रे । घरमा कोही हुनुहुन्न रे ? अनि भन्नु पर्दैन मलाई फोन गरेर……….। ल म आँए । रमाइलो गर्नुपर्छ है, हुन्छ नि भन्दै सनमले फोन राख्छ । साथी आउँदासम्म ल्यापटप चलाएर बस्छु भन्दै ल्यापटप खोल्छ ।
ल्यापटप चलाउँदै जाँदा त्यसभित्र रहेका अश्लिल फोटो हेर्न थाल्दछ । सनमको मनमा वासनाका तरंगहरु जागृत हुन थाल्छन् । त्यत्तिकैमा बिजुको आगमन हुन्छ । “ओई के हेरेर बसेको त ?” अकमकाउँदै सनम बोल्छ । केही होइन यार । यत्तिकै म त नेट चलाउँदै बसेको छु । सनमको अनुहारमा एकाएक नर्भसपन देखेर बिजु आश्चर्य पर्छ । आफूसँग ल्याएको मदिरा निकाल्दै, ल खानु पर्छ अब सनम, जा बरु गिलास र केही खानेकुरा लिएर आइज । सनम मन्दमुस्कानमा बोल्छ । खानेकुरा त केही छैन यार फलफूलहरु छ त्यही लिएर आउँछु है । त्यत्ति भन्दै सनम भान्सामा छिर्छ ।
बिजु भने मदिराको बोतल टेबलमा राख्छ अनि ल्यापटपतिर आँखा लगाउँछ । र भुनभुनाउन थाल्छ । यसलाई त पोर्न फिल्म अनि फोटोहरुको बानी पो परेछ । हेदैै जाँदा एकाएक बिजुको हसिलो मुहार उदासपनमा परिणत हुनजान्छ । सनमा फलफूल र गिलास लिएर आउँछ । अनि दुबै जना मजाले पिउन थाल्छन् । बिजु बेला बेलामा आफैमा हराइरहेको थियो भने उसको दिमागमा अरु केही नै चलिरहेको थियो । दुबै जना मात्छन् । अब त म पिउन सक्दै न यार बरु ढिला भइसक्यो म अब घर जानु पर्छ । सनम पनि मातेको हुनाले बोली फुट्दैन । नाई सक्दैन म पनि पिउन । त बेलैमा घर जा । बरु भोलि बिहान भेटौला । हुन्छ नि भन्दै बिजु उठ्छ । बिजुलाई जान लाको देखेर सनमले बोतल उठाउँदै ल यो बोतल पनि लिएर जा यार ।
नत्र आमा बाबाले देख्नु भयो भने मार्नुहुन्छ मलाई । यति भन्दै बोतल बिजुको हातमा थम्माई दिन्छ खित्का छोड्दै बिजु बोतल लिई निस्कन्छ । साँझ पर्छ नसाले राम्रैसँग सनम झुम्मेको हुन्छ । पुनः ल्यापटपमा आँखा लगाउँछ र अश्लिल भिडियोहरु हेर्न थाल्छ । खै के सोच्छ अनि मनमनै “…ला कतै बिजुले त देखेन……! रातको आठ बज्छ एकाएक बजेको फोनको घण्टीले सनम झसङग हुन्छ । हेलो भन्दै सनम बोल्छ । उताबाट बाबु के गर्दै छस् भन्दै सनमको आमा बोल्नु हुन्छ । जवाफमा आमा यतिकै टिभी हेर्दै बसेको छु । ल बाबु हामी भोलि आउँछौं । फ्रिजमा खाना छ ।
तताएर खाएस् अनि कुनै पनि अपरिचित मान्छेलाई घरमा आउन नदिएस् र ढोका राम्ररी लगाएर सुतेस् है बाबु । हस् हुन्छ नि आमा भन्दै सनमले फोन राख्छ । टेबल अनि दिउँस पिएका गिलासहरु सफा गर्न थाल्छ । त्यत्तिकैमा ढोकाबाट आवाज आउँछ । को हुनुहुन्छ ? कता कता कोही बोलेको आवाजले सनम एकटकसँग अड्डिन्छ र कान ठाडा बनाउँछ । पुनः आवाज आउँछ । भित्र को हुनुहुन्छ । हत्त न पत्त सनम टेबुल सफा गर्ने कपडा एकातिर फाल्दै ढोकातिर लम्किन्छ । ढोका खुल्लै हुन्छ । ढोकाको दैलोमा एक जवान केटीलाई उभिएको देख्छ । बाहिर…… पानी परिरहेको छ अनि मलाई डाक्टरसाबसँग भेट गर्नुपर्ने थियो तर उहाँको फोन नै लागिरहेको छैन भनि ती जवान युवती बिस्तारै बोल्छिन् । सुनेर पनि नसुझै गरी सनम एकटकसम्ग ती युवतीतिर हेरिरहन्छ ।
अनि मनमनै वाह क्या जीउ डाल छ । लाग्छ स्वर्गकी अपसरा नै धर्तीमा झरै झैँ अनि गुलावी ओठ, ती मृग नयनी आँखा, हिमशिखर झै उठेका छाती अनि ती सर्लक्क परेका केश……………। नानाथरीका कुराहरु मनमा खेलाउँदै उसका मनका चाहनाहरुले सीमा नाघिसकेको थियो । ती जवान युवती पुनः बोल्छिन् के भयो– किन तिमी चुपचाप छौं । ती युवतीको कुराले सनम सपनाको संसारबाट बाहिर निस्किन बाध्य हुन्छ । …..आउनुस् न भित्रै म बाबासँग कुरा गराइदिन्छु भन्दै सनमले ति युवतीलाई भित्र आउने इशारा गर्छ । ती अपरिचित युवती बोल्दै मेरो नाम निमा हो । म धेरै टाढाबाट आएकी हुँ । डाक्टरसाबसँग कुरा भएर नै म घरबाट हिँडेकी हुँ तर बाटोमा जामका कारण ढिला हुन पुग्यो । मैले यो ठाउँमा कसैलाई चिन्दैन ।
निमाको कुरा सुनेर विनम्रपूर्वक सनम बोल्छ । आत्तिनु पर्दैन । ढुक्कसँग बस्नुस् । बाबा भोलि विहान आउनुहुन्छ । अनि भेट्नु होला । मन हल्का गराउँदै निमाले लामो सास फेर्छिन् । पानीमा निथ्रुक्क भिजेकोले निमा काठ्याङग्रीएकी हुन्छिन् । सनमले उनलाई भिजेको देखर लुगा फेर्न सल्लाह दिन्छ । हुन्छ भन्दै निमा बाथरुममा छिर्छिन् । केही क्षणपश्चात निमा बाहिर निस्कि सोफामा बस्छिन् । सनम निमालाई यस्तो रुपमा देखेर घटघटी थुक निल्छ । उनले वान पिस मात्र लगाएकी हुन्छिन् । जुन रुप देखेर जोकोही पनि उनीप्रति लालायित हुन्थ्यो ।
लाज मान्दै निमा आँखा तल पार्छिन् । सनमले होस गुमाउँदै उनीतर्फ बढ्छ । अनि बिस्तारै हात उनको जीउमा दौडाउन थाल्छ । ……यो के गरेको मलाई मन पर्दैन । र यो गलत पनि हो भन्दै सनमको हात झट्कार्छिन् । सनम जुरुक्क उठेर अर्को सोफामा गई बस्छ । यसरी एकाएक सनमलाई रिसाएर अर्कोतिर गएको देखेर निमा उसको नजिकै जान्छिन् र उसको कपाल मुसार्दै बोल्छिन् । के भयो ? किन रिसाएको ? मैले केही गलत भने र…….? निमा यति बोल्न नपाउँदै सनमले निमालाई आफूतिर तान्छ र चुम्बनको वर्षात गर्न थाल्छ । क्षणभरमै उनीहरु एकअर्कामा बिलिन हुन पुग्छन् ।
बिहानको नौ बज्छ । सनमको आँखा खुल्छ । छेउमा निमालाई सुतेको देखेर घडीतिर नजर दौडाउँछ । अनि हतार हतार लुगा लगाउँछ । निमालाई उठाउँदै ओई निमा उठ न । छिटो गर न मेरो आमाबुबा आउने बेला भइसक्यो । आँखा मिच्दै निमा बोल्छिन् । किन हतारिएको चिया खुवाउ न बरु । सनम नर्भस भएको हुन्छ । …….चिया बाहिर गएर खाँदा पनि हुन्छ प्लिज निमा जाउँ न यहाँबाट आमाहरु आउने बेला भयो । मुसुक्क हाँस्दै निमा बोल्छिन्– रातभरि त सुत्न दिएनस्, कहिले पनि छोड्दैन भन्थिस् अहिले जा त जा भनेर ममाथि घुर्की लाउँदैछस् । तिमीबाट एक्कासी त भनेको सुन्दा सनम अचम्म पर्छ । पुनः निमा बोल्छिन् एक रातको मुल्य चाहिन्छ मलाई । हैन भने म यहाँबाट जान्न । निमाको कुरा सुनेर सनम दुःखी हुन पुग्छ । उसको सोच्ने शक्ति नै हराउँछ ।
“मलाई दश हजार चाहिन्छ, हैन भने म त बदनाम नै हुँ तर तेरो बदनामीको दाग तेरो आमाबाबाले सहन नसक्लान् नि….।” पागल झै सनम् घरको चारैतिर पैसा खोज्न थाल्छ । तर उसले पर्याप्त पैसा भेटाउँदैन । अनि एक कुनामा गई रुन थाल्छ । उसको दिमागले काम गरेको हुँदैन । क्षणिक वासनाको लागि जिन्दगी दाउँमा लागेको देखेर उ निकै चिन्तित हुन पुग्छ । अनि मनमनै बाबाआमाको अगाडि कसरी मुख देखाउनु मैले । समाजमा मेरो आमाबाबाको के नै इज्जत रहला । मेरो गल्तीको सजाय उहाँहरुले किन भोग्नु । यस्ता किसिमका कुराहरु खेलाउँदै सनम आमाले भनेका कुरा सम्झिन थाल्छ । “…..बाबु अपरिचित मान्छेलाई घरभित्र पस्न नदिनु है र ढोका राम्रोसँग लगायस् है बाबु…..”
केही समयपछि सनमको बुवाआमा आईपुग्नु हुन्छ । घरको बाहिर भिड देखेर दुबै जना आत्तिदै दौडिन्छन् । आँगनमा प्रहरी लगायत छरछिमेकीहरुको ताँती हुन्छ । सनमको लासलाई बाहिर निकाल्दै एक प्रहरी जवान बोल्नु हुन्छ । “…..पंखामा डोरी लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला पारेका हौं….।” बुवाअमा भक्कानो फुटाई फुटाई रुन थाल्छन् । उनीहरुको चित्कार चारैतिर जुञ्जिन थाल्छ । बिजु पनि त्यो सबै थोक हेरिरहेको हुन्छ । तर उसको मुहारमा निराशा हैन बल्की मन्दमुस्कान हुन्छ ……।
अघिल्लो दिनलाई सम्झिन थाल्छ । जब सनम गिलास लिन भान्सामा छिरेको थियो त्यो समयमा बिजुले ल्यापटपमा आफ्नी बाहिनीको फोटो पनि देखेको थियो । जुन फोटोलाई अश्लिल फोटोमा सनमले परिणत गरेर राखेको थियो । गए राति निमा नामकी बेश्यालाई पनि बिजुले नै पठाएको हुन्छ ।
…….बिजु मन्दमुस्कानमा मनमनै “जैसी करनी वैसी भरनी” भन्दै आफ्नो गन्तव्य तिर लाग्छ ।
कृषि उपज बजार केन्द्र नहुंदा समस्या
जबर्जस्तीको करणीको प्रयास गर्ने विक कारागार चलान
सूचनाको पाए लगत्तै काम गर्छु ः एसपी पोख्रेल
राप्ती ववई सहायक क्याम्पस प्रमुखमा शर्मा
उपमहानगरपालिकाले नसुनेपछि आँफै सरसफाई
गढवामा कृषिको जग्गाको कर पचास प्रतिशत घट्यो
गढवामा फोहर ब्यवस्थापन गरिने
कोसेली घरमा सिन्कीको अचार देखि बधिया भालेसम्म